Naples iyo quruxdeeda | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Italia, Maxaa la arkaa
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Talyaanigu waa Naples, caasimada Campania. Sidoo kale waa goob dalxiis oo aad u weyn tan iyo markii ay leedahay kumanaan sano oo taariikh ah waana mid ka mid ah meelaha ugu faca weyn adduunka ee lagu sii noolaado.
Xarunta taariikhiga ah ee Naples waa Dhaxalka aduunka laakiin meelaheeda xiisaha leh kuma koobna halkaas oo keliya. Ma jeceshahay fikradda ah inaad u safarto magaaladan Talyaaniga? Aan aragno waxa ay u leedahay qofka socotada ah.
Sidaan horay u sheegnay, Naples waa magaalo aad u facweyn waxayna leedahay taariikh dhan 2800 sano. Sidaa darteed, waxaan helnaa dhismayaal iyo goobo qiimo weyn taariikheed leh. Waxaan ka hadli karnaa Naples taariikhi ah, mid qadiimi ah iyo Naples dabiici ah. Oo waxaan u maleynayaa inaan hoos u dhacayo.
Marka aan ka bilowno Naples-ka qadiimiga ah. Magaaladu waxay ku dhow dahay burburka Pompeii iyo Herculaneum laakiin sidoo kale waxaa jira burbur kale oo ka soo bilawday xilligii Griiga ee Naples. Waxaan markaa haysannaa Campano Amphitheater iyo Flavio amphitheater, tusaale ahaan. Ku Catacombs ee San Gaudioso hoos Basilica Santa María della Sanitá iyo kuwa San Gennaro, tusaale ahaan.
Waxaa jira Qabuuraha delle Fontanelle iyo dhowr "jardiinooyin qadiimiga ah": Herculaneum, Paestum, Pompeii, Elea Velia, Cuma iyo Baia. Dhammaan burburkaan, kuwii Pompeii iyo Herculaneum waa kuwa aadan seegi karin haddii aad waqti yar haysato. Maalmo dheeri ah kama hadhi doono mid kale. Pompeii waxaa ku yaal Macbadka Iside, burburka tiyaatarka, Guriga Faun, Villa dei Misteri iyo guryo, dukaamo, madal, qubaysyo iyo dhismayaal kale.
Magaalada Naples waxaad uga bixi kartaa Pompeii tareen ama bas. Gelitaanka wuxuu ku kacayaa 15 euro inkasta oo Axadda ugu horreysa bil kasta ay bilaash tahay. 18 euro waxaad ka iibsan kartaa kaarka saddexda goobood ee qadiimiga ah (Pompeii, Oplontis iyo Boscoreale). Way ku habboon tahay.
Marka laga hadlayo burburka Herculaneum, oo aad ugu eg Pompeii, wadada weyn, Decumenus, oo tagta Madasha, Guriga Argo, Guriga Ariside, qubaysyada kuleylka leh, jimicsiga iyo tiyaatarka oo qaada dad gaaraya 2500 qof. , tusaale ahaan. Meel u dhow waxaa sidoo kale ku yaal matxaf dalxiis ah, MAV, halkaas oo aad kala kulmi karto nolol maalmeedka magaalada qadiimiga ah ka hor inta uusan qarxin volcano Vesuvius.
Tareenka ka yimaada Naples waxay qaadataa 40 daqiiqo. Albaabka laga soo galo waa 11 euro laakiin haddii aad haysato Naples Pass waxaad bixinaysaa qiyaastii 5, 50 euro ka yar. Wuxuu furmayaa 8:30 subaxnimo ilaa 7:30 pm, guud ahaan, laakiin hubi ka hor intaadan aadin maxaa yeelay way kala duwan tahay bil kasta. Adoo ka tagaya labadan meelood ee caanka ah, hadaad taariikhda jeceshahay Taariikhda Qadiimiga ah ee Boscoreale Waa ikhtiyaar kale oo xiiso leh maxaa yeelay waa degel diiwaangeliya nolol maalmeedka dadka ku nool aagga oo ay jiraan kuwo qurux badan Burburkii Villa Regina, guri caadi ah oo Roman ah.
Ka dib waa inaan ka hadalnaa waxa ku saabsan Naples dhexdhexaad ah iyo qalcaddiisa. Magaalada, dhab ahaan, waxaa loo yaqaanaa "Magaalada toddobada qalcadood", laakiin seddex aad booqato waad fiicnaan doontaa: Castle dell'Ovo, Castle Sant'Elmo iyo Castle Maschio Angioino.
The Castle dell'Ovo waa kan ugu da'da weyn Naples waxaana laga dhisay jasiirad yar oo ka horreysa dekedda Santa Lucia. Kahor qarnigii XNUMXaad waxaa horey u jiray qalcado Roomaan ah oo halkaas ku yaal, iyada oo qayb ka ah hoyga Roman ee General Lucio Vicinio Luculo. Frederick II wax walbuu u badalay qalcaddi qalcaddiina waxaa loogu magacdaray Castle Egg iyadoo loo tixraacayo "ukunta" laga yaabo in Virgil ay dhigtay / ku qarisay qafis qolka hoose ah. Ogolaanshuhu waa bilaash.
El Castel Sant'Elmo ama Qalcadda Saint Elmo waxaa loo beddelay sidan oo kale ku xigeenka Don Pedro de Toledo qarnigii XNUMXaad. Waxay u egtahay xiddig lix gees leh oo leh saldhiga iyo moats. Waa inay difaacdaa magaalada laakiin isla mar ahaantaa maamushaa sidaas darteed waa sababta ay ugu xiran tahay Quarter-ka Isbaanishka iyo Plaza Real. Maalmahan waa madxaf oo keydi panorama qurux badan. Gelitaanku waa 5 euro.
Ugu dambeyntii, Castel Maschio Angioino ku taal Piazza Municipio. Waxay ka bilaabmaysaa waqtiyadii boqortooyadii ugu horeysay ee Neapolitan waxaana lagu dhisay amarrada Carlos I d'Angio qarnigii XNUMXaad. Boqorradii dambe waxay sameeyeen wax ka beddelladooda oo qaabka hadda jira waxay ka bilaabmaysaa xilligii magaalada Aragon ee magaalada laga xukumayay. Maanta Waxaa lagu booqdaa booqasho dalxiiskuna waa 6 euro.
Waxaan sidoo kale sheegnay in Naples ay leedahay soo jiidasho dabiici ah. Waxaad booqan kartaa Grotto ee Castelcivita, the Gruta di Pertosa-Auletta iyo laba volcanoes, oo caan ah Vesuvius iyo Fulkaano Solfatara. Ogaanshaha Vesuvius wuxuu socod ku marayaa taariikhda. Waxay ka tirsan tahay jardiinada dabiiciga ah ee ah Goobta Dhaxalka Adduunka oo aad u fuuli karto si aad ugu bogaadiso flora iyo fauna oo aad ka hesho wax walba dusha sare, aragti cajiib ah.
Marka la eego matxafyada, Naples waxay leedahay waxyaabo badan oo xiiso leh laakiin waxay kuxirantahay waxaad jeceshahay. Aniga, dhankeyga, waxaan dooran lahaa inaan booqdo Matxafka Jirdilka, Matxafka Khamriga, San Lorenzo Maggiore Monumental Complex, Matxafka Archaeological Museum, Matxafka Acropolis, Villa dell'Antica Capua Museum, Matxafka Gladiator ama Royal Palace of Naples. Kuwani waa qaar ka mid ah matxafyada badan ee Naples leeyahay waana ka tagay kuwa farshaxanka, laakiin haddii aad jeceshahay farshaxanka caagga ah way badan yihiin.
Haddii fikraddaadu tahay inaad socod ku dhex marto hareerahaaga, taasi waa, samee safar maalinle ah oo ka socda Naples, waxaa jira goobo fara ku tiris ah oo lagu talin karo: Capri, Amalfi, Eremo dei Camaldoli, Ischia, Sorrento, Pozzuoli ama Procida. Tusaale ahaan, Amalfi, haddii loo baahdo, waxaad ku imaaneysaa tareen goboleed laba saacadood gudahood.
Si aad ugu raaxaysato dalxiiska Naples waxaad heli kartaa Naples Pass, oo ah kaarka dalxiiska kaas oo 40% qiimo dhimis ka sameeya dukaamada, maqaayadaha iyo hoteelada iyo matxafyada. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku isticmaali kartaa gaadiidka dadweynaha magaalada dhexdeeda.
Waxaa jira saddex nooc: 3 maalmood, 7 maalmood iyo sanad dhan. 3-maalin dhaaf ilaa 25 sano waxay ku kacaysaa 29 euro iyo 13 euro oo lagu daray isticmaalka gaadiidka iyo matxafyada. Naples Pass ee 7 maalmood ah in ka badan 25 sano waxay ku kacaysaa 49 euro halka 10 ka badanna aad leedahay albaab laga galo matxafyada. Kaarka waxaa ku jira gelitaanka Pompeii. Safar wacan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Italia » Naples iyo quruxdeeda
Maxaa lagu arkaa Burano